Cilmibaaris Sheegtey in Minnesota ay ka Mid Tahay Meelaha Dalka ugu Cunsurisan – XOGMAAL.COM
Dadka aan Caddaanka Ahayn ayat ugu Furfuran Minnesota
By Muriidi Baba	 Last updated Mar 20, 2019
Gobolka Minnesota ayaa ka mid ah meelaha dalka ugu cunsurisan sida ay sheegtey cilmibaaris dhawaan la sameeyey. Magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolios iyo St. Paul ayey warbixintu sheegtey in ay safka hore kaga jiraan cunsurinimada oo aysan ku ekeyn tuulooyinka ay cadaanka oo kaliya degan yihiin.
Cilmibaaristan oo lagu wareystey 2,000 oo qof ayaa tilmaantey halka ay cunsuriyadu ka joogto dad xirfadleyda ah ee shaqooyinka dhexe iyo kuwa sareba haysta. Cunsirinimadan ma ahan oo kaliya sida ay dadka caddaanka ahi u arkaan soogalootiga, madowga iyo ab-ogaaga, balse waxa ay sida oo kale ka hadleysaa caddaanka dhexdooda.
Dabcan, waxa aad isweydiin kartaa akhristoow maxay caddaanku isku cunsuriyeeyaan? Takoorku kuma yimaado midab oo kaliya ee waxa uu leedahay wajiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin diinta, jinsiga, mabaadiida, asalka iyo wixii la mid ah. Suaalaha ay warbixintani xambaarsaneyd waxaa ka mid ah, sideed u arragtaa in walaashaa uu guursado qof dimuquraadi ah? Waxa kale oo ka mid ahaa, sidee ayey oraahda “daneyste” u qeexdaa Republican-ka.
Arrinta la yaabka ahna waxa ay noqotay in dadka ugu badan ee cunsiriyiinta ah ay noqdeen kuwa aqoonta sare leh, dadka magaalooyinka ku nool iyo waayeelka. Balse maadaama dadka shaqooyinka sare haya ay lacag fiican sameeyaan, waxa ay awoodaan in ay ku noolaadaan degaan ay xirteen kuwa ay isku fikirka yihiin si ay uga fogaadaan ismaandhaaf. Halka dadka ka fikirka ah ay u arkaan kuwo sharwadayaal ah oo meelo kale ka soojeedo.
Warbixintu waxaa ay sheegtey in dadka aan caddaanka ahayn ay yihiin kuwa ugu dulqaadka badan ee aan cunsuriyiinta ahayn. Sababta ay dadka midabada kale ah ay ugu furfuran yihiin bulshada Minnesota ayay warbixintu ku sheegtey in aysan doorasho lahayn, balse ay ku qasban yihiin la dhaqanka dadka ka badan ee caddaanka gobolkan.
Warbixintan waxa loo sameeyey wargeyska The Atlantic oo ka sheekeeyo degaanada ugu furfuran ee ay dadkoodu isdulqaataan iyo kuwa aan dulqaadka lahayn.
Kenya oo diyaarineysaa qorshe cusub oo ay ku sheeganeyso Kheyraadka Badda Soomaaliya